samedi, 16 juillet 2016 22:29
Ambohimangakely : Tratra ny mpangalatra sy mpivarotra taolam-paty
Nalaza ho maro vaky fasana Ambohimangakely sy ny manodidina roa taona lasa izay. Rehefa nisy ny fiaraha-miasan’ny vahoaka sy ny mpitandro ny filaminana dia nody ventiny ny rano natsakaina satria dia tratran’ny zandary avy ao amin’ny borigady Ambohimangakely-Antananarivo Avaradrano, tarihan’ny Adjudant-Chef Kelly Franco Jhon ny mpamaky fasana sy ny mpivarotra taolam-paty tao amin’ny Fokontany Ambohimahatsinjo ny alin’ny 15 Jolay 2016. Tratra tamin’izany ny olona niisa fito ka vehivavy ny iray miaraka amin’ireo fitaovana nanaovan’izy ireo ny asa ratsiny. Tsy tratra ambody omby ity indray mitoraka ity fa tratra ambody fasana. Taolampaty roa gony no tratra tamin’izany.
vendredi, 15 juillet 2016 09:37
Ampasikely-Amparafaravola : Tonga nandray ny toerany ny Ben'ny tanàna vaovao, Dr Robinson Jean Louis
Ny alarobia folakandro 13 jolay no niditra voalohany ny Lapan'ny tanànan’ny Kaominina Ampasikely, Distrikan’Amparafaravola ny dokotera Robinson Jean Louis. Hanatanteraka ny famindram-pahefana ny anton-diany saingy nilaza ho tsy mahefa izany ny lefitry ny Ben'ny tanàna ka niroso tamin'ny fampiharana ny didy efa navoakan’ny Fitsarana tampony ny vaditany sy ny dokotera Robinson Jean Louis. Tokony alohan'ny 12 jolay no hanatontosana ny famindram-pahefana raha ny taratasy eny ampelatanan’ny Ben'ny tanàna vaovao ny dokotera Robinson Jean Louis. Tsy nipoitra anefa ny Ben’ny tanàna teo alohany na dia efa nialana nenina aza. Voatery tsy maintsy namoha ny birao tamin'ny alalan'ny vaditany ny Ben'ny tanàna vaovao, hanatontosana ny famaritana ireo fitaovana izay mbola hanan'ny Kaominina.
dimanche, 10 juillet 2016 12:41
Ambava homana am-po mieritreritra
« Tsy hiray tsikombakomba amin’ny tery vay manta amin’ny fandaniana an’io sata mifehy io fifandraisana io ny Mapar. Ary ny tantara no hitsara antsika tsirairay avy » hoy ny solombavambahoaka Razanamahasoa Christine, mpiara dia amin’i Andry Nirina Rajoelina, filohan’ny tetezamita farany teo.
vendredi, 08 juillet 2016 17:36
Alaotra: Lafo vidy ny hazandrano
Anisan'ny mampalaza an'Alaotra ankoatra ny fambolem-bary ny fisian'ny hazandrano sy trondro maro karazana. Hita niakatra anefa ny vidin'ny hazandrano ka maro ihany ireo mitaraina, nefa ireo mpivarotra milaza maty antoka ihany koa satria dia lafo koa ny akany azy amin'ireo mpanarato sy mpanjono. Ireo mpambongady mitondra miakatra any Antananarivo sy ny manodidina moa dia mitaraina amin'ny faharatsian'ny làlana sy ny alafosan'ny gilasy hitehirizana ny trondro tsy ho simba. Mijaly rahateo ireo mpamokatra gilasy satria dia voatery mampiasa giropy satria raha efa mandry ny gilasy ka tapaka ny jiro dia miverina toy ny tsy misy ka lasa rano ny gilasy.
vendredi, 08 juillet 2016 15:33
Tsenabe Zama 2016 : Maro ireo vahiny ivelan'ny faritra tonga aty Alaotra
Ankoatra ny mpivarotra enta-madinika sy hanimasaka, dia efa saika mameno ny trano fandraisam-bahiny aty Ambatondrazaka ny mpandraharaha vaventy avy any Antananarivo. Manodidina ny fitopolo any ho any ny trano heva hampirantian'ny mpandraharaha ny vokatra misy ao aminy.
vendredi, 08 juillet 2016 10:36
Antsirabe : Mpandeha taksiborosy nahatrarana rongony 4kg
Saron’ny polisim-pirenena taty Antsirabe nitondra rongony 4kg eo ny mpandeha taksiborosy iray ny alakamisy 07 jolay maraina. Ny fisavana mahazatra fanao amin’ny lalam-pirenena faha-7 no nahatratrarana ity zava-mahadomelina ity tao Tombontsoa. Lehilahy iray, 30 taona eo, no nitondra azy tamina kitapo fibaby ary napetrany tao ambanin’ny sezany. Nampiahiahy ny polisy ny fihetsiny nandritra ny fisavana, ka dia nojerena ny entany ary dia rongony tokoa no tao.
jeudi, 07 juillet 2016 13:25
Taxi-be: Hiakatra ny “frais”
Hiakatra ho 500 ariary ny saran’ny taxi-be eto Antananarivo manomboka ny 26 ny volana jolay 2016 izao. Io no tapaky ny UCTU, izay nivory androany faha 7 ny volana jolay. Mbola tokony ho amboni’izany aza ny saran’ny taxi-be izay hatrany amin’ny 750 ariary hoy Andriambinintsoamora Bernardin, filohan’ny UCTU saingy noho ny fijerena ny marimaritra iraisana no nandrisana io fepetra io.
jeudi, 07 juillet 2016 10:26
Satan’ny mpanao gazety sy ny serasera : Hanelanelana ny Firenena mikambana
Manoloana ny letrezana nentina nandrosoana ny dinika momba ilay volavolandalam-panovana ny sata mifehy ny serasera teny anivon’ny Antenimieram-pirenena, izay nafana tokoa ny fifandresen-dahatra teo amin’ireo Solombavamboaka sy ny governemanta etsy andaniny ary ny mpanao gazety sy ny fiarahamonim-pirenana sy ny Firenena mikambana ankilany, raha saika hanao an-tery tamin’ny fampandrosoana ny dinika ny Solombavambahoaka dia tsy nanaiky hatramin’ny farany kosa ny mpanao gazety fa mitaky ny fiandrasana ny fanelanelanana ataon’ny Firenena mikambana eny anivon’ny Fiadidiana ny Repobilika sy ny praiministra mba hiverenena indray handinihana hatrany am-boalohany ity satan’ny mpanao gazety sy ny serasera ity. Fantatra moa fa hiroso hatrany anio alakamisy 07 jolay tolakandro ny fandinihina sy mety ho fanapahana io lalàna io ireo solombavambahoaka izay hivory azon'ny rehetra hatrehina.
mardi, 05 juillet 2016 12:04
HAFARI Malagasy Antsirabe : Hankalaza ny faha roa taonany
Feno roa taona amin’ity taona ity ny nijoroan’ny Hafari Malagasy Antsirabe sy ny tetikasa “Exode Urbain” ataon’izy ireo ao Antsoantany, Distrikan’Antsirabe faharoa. Hankalaza izany izy ireo ka hetsika maro no fantatra fa hatao ny 23 sy 24 Jolay ho avy izao. Nitsidika an’Antsirabe araka izany i Rafanomezantsoa Jean Nirina, filoha nasionalin’ity fikambanana ity, ny alahady 03 Jolay teo, nijery ireo fotodrafitra efa vita ao Antsoantany sy hanomana ny fitokanana izany. Trano maromaro no efa vita ao an-toerana ary ho tokanana amin’io fotoana io, izay an’olona tsotra nisafidy ny hanao ity fifindra-monina ity any Antsoantany ary olona efa maherin’ny 200 no fantatra fa efa namandrika tany ao ihany koa.
lundi, 04 juillet 2016 21:05
Fihaonanan'ny Filohan'ny vaomiera Serasera sy ny Mpanao gazety
Tonga nihaona tamin’ny mpanao gazety io hariva io tao Antanimena ny filohan’ny komisiona serasera eo anivon’ny antenimieram-pirenena ny Solombavambahoaka Mamangy Norbert Alias Jack (Sambava) , ary dia mbola tsy nisy zavatra voavaha hatrany, fa dia mbola hiresaka sy handinika ilay volavolan-dalana eny amin’ny PNUD ny tenany. Nilaza kosa izy fa tsy maintsy miara-miasa amin'ny mpanao gazety ny fitondrana raha tsy te ho sahirana.